အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ရာ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 22, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 23, 2007 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်မှုပညာအကြောင်းမည်မျှစိတ်အားထက်သန်သည်ကိုနားလည်သည်။ ငါပြောချင်တာကငါဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပါစေငါကိုယ်တိုင်စီမံကိန်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါစေ…ငါ့ရဲ့အိမ်၊ ငါ့သားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်အရမ်းနည်းတယ်။ ဘီလ် နှင့်သမီးကေတီ။ နက်ဖြန်နေ့၌ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာနှင့်တွေ့ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရည်အချင်းရှိသော၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်သော၊ ချစ်ခြင်း၊
သူကဂစ်တာ၊ မိုက်ကရိုဖုန်းသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရောစပ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်၏သားသည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။ သူစတင်နေပြီ IUPUIရူပဗေဒဘွဲ့နှင့်ပြင်သစ်၊ Acoustical အင်ဂျင်နီယာ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအပါအ ၀ င်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသေးအမွှားဖြစ်နိုင်သည်။ သင်အချို့နားထောင်ရန်လိုအပ်သည် မိမိ site ပေါ်တွင်သူ၏ဂီတ သူ၏အခွက်တဆယ်ကိုကြားရန်၊
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတိုင်းသို့မဟုတ်ကလေးငယ်များသည်သူတို့၏အမေနှင့်အတူအချစ်ဆုံးအချိန်ကုန်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကွာရှင်းထားတာ ၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါကငါတို့အားလုံးမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လေးစားမှုထားကြတယ်။ ငါတို့ရဲ့စစ်ပွဲကိုကလေးတွေကတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး၊ ငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုလုံးကသူတို့ပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဥပမာတစ်ခုမှာ Bill အတွက်ဘွဲ့ရကဒ်များကိုသူအနေနှင့်ကျွန်ုပ်ကောလိပ်အတွက်ငွေရှာရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူ့မှာကားလိုတယ်၊ စာအုပ်တွေအတွက်ပိုက်ဆံလိုတယ်။ သူကကျူရှင်မှာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အမေကကြေငြာချက်အားလုံးကိုသူ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများထံပေးပို့သည်။ အဲ့ဒါတော်တော်အေးတာပဲ (ကွာရှင်းပြတ်စဲနေသောသို့မဟုတ်မည်သည့်မိဘများကွာရှင်းပြတ်စဲနေသောမိဘများကိုမဆိုကလေးများအကြောင်းပါ။ )
၄၅ မိနစ်ကားမောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုသီဆိုသည်။ ကားမောင်းနေတဲ့လူတွေဟာငါတို့ကအရူးပဲလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးသည် Meatloaf မှ Bat of Hell ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်ပြီးအရာရာကိုသီဆိုကြသည်။ လမ်းပေါ်မှာ 45s နှင့် 70s ဘူတာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဘာမှမရှိဘူး။
ပြီးတော့ငါတို့သီချင်းဆိုတဲ့အခါငါတို့အားလုံးကိုအရာအားလုံးထဲထည့်လိုက်တယ်။ ပြဇာတ်တွေ၊ နားတွေထိုးဖောက်နိုင်လေလေပိုကောင်းလေပဲ။ (ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကစားနည်းဖြစ်သော“ ထိုလမ်းပြမြေပုံကိုခန့်မှန်းပါ”) အတွက်ခဏတစ်ကြိမ်သီချင်းဆိုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်သည်။ Exit 50B သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အသက်ရှူခြင်း၊ အသံထွက်ခြင်းနှင့်အရူးကဲ့သို့ရယ်မောခြင်းများဖြစ်လေ့ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်သမီးသည် Bloomington တွင်ကျင်းပသော Indiana ပြည်နယ်သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကပ်ဘေးကြီးနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် - ပထမဆုံးသော့သည်ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးကေတီသည်သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုမေ့သွားသည်။ သူမငိုချလိုက်၊ ငါသူမကိုမကူညီခဲ့ဘူး - သူမသူ့ကိုယ်သူပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်လေးကသူလုပ်ပြီးနောက်မှာကျွန်မတို့ပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ ကေတီဟာလှပတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးရွှေကိုဆင်းသက်ခဲ့တယ်။
ယနေ့ညသည်၊ ၆ တန်း၊ ၇ တန်းနှင့် ၈ တန်းကျောင်းသားများအတွက် Greenwood အလယ်တန်းကျောင်း၌နွေ ဦး ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်သည်။ ကေတီတွင်တစ်ကိုယ်တော်“ အပြာရောင်ပုံတူ” ရှိပြီးတစ်လလုံးသီချင်းသီဆိုခဲ့သည်။ သူမဒီညသွားမသွားမီအကြံဥာဏ်တစ်ချက်ပေးလိုက်သည်။ သူကအစက်အပြောက်တစ်ခုရှာပြီးကြည့်လိုက်သည်။ ဒီပွဲမှာမိဘနဲ့ကျောင်းသားတရာစုံတွဲရှိတယ်။ ဒီတော့သူမစိတ်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူမမသွားခင်သူမကကျွန်မအတွက်သီချင်းဆိုနေတယ်လို့ပြောတယ်။
ငါဒီနေ့တစ်နေ့လုံး Katie အကြောင်းသူမဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားရမလဲ။ ထိုအကောင်လေးသူမလုပ်ခဲ့တယ်! သူမ၏တစ်ကိုယ်တော်အားကစားခန်းမ၌ဆူညံနေသည်။ ငါ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာမရှိပေမယ့်ငါ PDA ကင်မရာဖုန်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖြစ်ရပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အရည်အသွေးဘယ်လောက်ဆိုးတယ်၊ အသံကအရမ်းကျယ်လောင်လွန်းလို့တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘလူးစ်ကို Katie သီဆိုနေတာတော့သေချာတယ်။
ငါ့မျက်ရည်မှာမျက်ရည်မကျဘူးလို့ပြောရင်ငါလိမ်လိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်မယုံနိုင်လောက်အောင်စကားလုံးများဖြင့်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေကလှည့်ပြီး“ မင်းသမီးရဲ့သမီးလား။ သူမသည်စိတ်ကူးယဉ်တယ်!” Katie ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့သူမဘယ်လောက်ပျော်လိုက်တာကိုကျွန်တော်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ကလေးတွေဟာငါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်ရာတွေပါ။
WordPress: ဒီစာမူကိုယနေ့ထုတ်ဝေလျှင် CSS ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
အဆိုပါ Geek စကေးတွင်, ဒီအဆင့်သတ်မှတ်!
မေလ 23, 2007 မှာ 3: 05 AM
Doug ဂရိတ် post! အစမှအဆုံးအထိဖတ်ပါ၊ အမြင့်ငါးခုကိုကေတီအထိဖတ်ပါ။
မေလ 23, 2007 မှာ 8: 43 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုနီ။ ငါကမာနကြီးတဲ့ Papa ပဲ။
မေလ 23, 2007 မှာ 3: 45 AM
ထို့အပြင်တစ်နေ့တာ၏ကိုးကားချက်အရ“ မျိုးရိုးလိုက်မှုသည်စမတ်ကလေးများ၏မိဘများကိုယုံကြည်သောအရာဖြစ်သည်။ ”
ပြီးတော့ဟေး၊ မင်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် content တွေကို hosting လုပ်ဖို့ဘလော့ဂ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလား။ သငျသညျနှစ် ဦး စလုံး youTubeGoogled ရှိရာနောက်ဆုံးဗီဒီယိုနှစ်ခု?
မေလ 23, 2007 မှာ 10: 19 AM
Doug လှပသော post ။ လမ်းမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့သားတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာမိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ခင်ဗျားဇနီးဟောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာဟာအံ့သြစရာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်းကလေးများအတွက်ဖြစ်သည်၊ မင်းကအမြဲတမ်းရန်ဖြစ်ပြီးကလေးများတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်လှည့်စားနေသောကစားနည်းတစ်ခုကဲ့သို့ကစားနေလျှင်၎င်းသည်တကယ်မအထောက်အကူပါ။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းလိုကြီးပြင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့တယ်။
မေလ 23, 2007 မှာ 10: 43 AM
Brandon ဂုဏ်ယူပါတယ် ငါ့ကိုယုံကြည်, လမ်းတစ်လျှောက်အမှားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်မိတယ်၊ တစ်ခါတလေသူတို့ထိုက်သင့်တဲ့ဂရုမစိုက်မှုတွေကိုငါ့ရဲ့ကလေးတွေကိုငါပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်တိုင်းဒေါသထွက်ရင်တောင်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်တယ်လို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြောကြတယ်။ ငါတို့သည်ပွေ့ဖက် ... အများကြီး!
ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအားလည်းကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားပြီးသူတို့အမှားများပြုမိသောအခါတောင်းပန်ပါသည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသည်။
ငါ့သားကငါတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပြောင်တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေလုပ်သလိုပဲငါတို့ကဆွဲထားတယ်။ IUPUI အတွက်သူတကယ်တော့အိမ်မှာနေမှာပါ။ ငါကအခုသူဌေးပဲ။
မေလ 23, 2007 မှာ 3: 36 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်, ထိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးကိုဝေမျှပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကားပေါ်ကဂိမ်းတွေဘယ်လိုကစားလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ သငျသညျကလေးတွေ, သင်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းပါစေ ... ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေး !!
မေလ 23, 2007 မှာ 7: 48 pm တွင်
Doug ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအားအရှိန်မြှင့်ရန်စိတ်ပူမိသည်။